Ngwongwo ihe na-emerụ emerụ na Ngosiputa Ngwa
Mma nke nwanyị Ngosiputa Ngwa na perfumery
Nwunye ọ bụla nke ogologo na ntutu isi, akpụkpọ anụ, agba nro na ihe ndị ọzọ. Mana ma ọ dịkarịa ala, otu onye n'ime anyị na-echekarị ụdị ụdị mma anyị ji eme ihe? Mmadụ ole n'ime anyị tupu anyị enweta karama shampoo maara nke ọma? Ekwenyesiri m ike na ọ bụghị. Ma ọtụtụ ihe ịchọ mma na-agụnye ihe ndị na-emerụ ahụ, site na nke kachasị mma ọ ga-enwe ihe ọ bụla, na nke kasị njọ - ha nwere ike imerụ ahu ahụ.
A na-achọta ha dịka ọ bụla ntanetị, ncha mmiri, mmiri ghere na ihe ndị ọzọ. Sodium Lauril Sulfate bụ ihe na-agbọ ụfụfụ nke e mere iji wepụ ihe mmerụ si akpụkpọ ahụ anyị, ezé na ntutu.
N'ihi eziokwu ahụ na nso nso a, enwere otutu ozi ezighi ezi banyere ihe ndị a na-adịghị anakwere bụ ndị nwere ike ịnweta arụ ọrụ, nke a na-ahụkarị na mgbasa ozi, "Nhazi Iwu" nke European Union, tinyere Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Agha na United States. O nwere ndepụta nke components ndị a kwenyere na ọ dị mma iji mee ihe na ịchọpụta ihe. Ya mere, ọbụna ma ọ bụrụ na ị hụ na ngwakọ nke ngwaahịa sulphates, ị kwesịrị ị na ekwesịghị ozugbo egwu. Ọ dị anyị mkpa ịmara itinye uche ha na ngwaahịa.
Ụdị ihe eji eme ihe na ihe ịchọ mma adịghị emebi usoro na ụkpụrụ ndị nwere ikikere. Ya mere, a pụrụ iji ha na-enweghị egwu ọ bụla. Ihe ọzọ bụ ụlọ ọrụ ndị a na-amaghị ama nke na-echekwa mgbe niile n'ichepụta ihe ma ghara ịgbaso ụkpụrụ na ụkpụrụ niile. Dika ihe eji eji ogwu eme ihe, enwere ike iwe n'aru ahu, aru nke anya, isi, oria iku ume.
Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ahụ ike gị, mgbe ahụ, a na-atụ aro ka ị jiri nlezianya na-emeso nhọrọ nke ngwaahịa a. A na - atụ aro ka ụmụ nwanyị na-enye ụmụ nwanyị na - agba umuaka ka ha jụ ọgwụ ohygiene na ihe ịchọ mma, nke nwere ihe ndị a: chlorine, sulfates, phthalates, formaldehyde, toluene na fluoride. Ihe ndị a nwere ike imetụta ahụ ike nke nne na nwata.
Mkpụrụ ndụ mgbochi
Ná mmalite nke narị afọ nke 21, ụlọ ọgwụ na-edozi ahụ, mgbe ahụ, ndị na-emepụta ihe ịchọ mma, malitere iji sel snoo. Enwere ọtụtụ nyocha na isiokwu a, ma ihe ọma ma ihe ọjọọ. Otutu ndi inyom na-atu egwu site na okwu a bu "nkpuru oku". Na n'efu. Mkpụrụ ndụ mgbochi dị ogologo bụ ihe ọmụmụ banyere nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịma mma - Dior na Loreal. Ruo ihe karịrị afọ iri, ihe niile a natara banyere mkpụrụ ndụ snoo na-edozi, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla chọpụtarala nke nwere ike imebi ahụ ike.
A na-eji mkpụrụ ndụ mgbochi mee ihe na ịwa ahụ. Ma nke kachasị mkpa, mkpụrụ ndụ anụ ahụ mmadụ adịghị agbanye n'ime ude. A na-eji ha eme ihe maka ọmụmụ ihe ndị gosipụtara na ọ ka mma itinye mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ na-eme ka ude. N'okwu a, ọ dịghị nsogbu ọ bụla e mere ma ọ bụ mmadụ ma ọ bụ osisi. Osisi mkpụrụ ndụ nwere mmetụta dị irè n'ahụ ọrụ nke mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ ahụ mmadụ, nyere ha aka ịnaghachi mgbe mmebi site na ụzarị ultraviolet.
N'aka nke aka, mkpụrụ ndụ mpi dị mma, ma ọ bụrụ na ejiri ha mee ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, ọzọ, agbaso usoro maka ịkwadebe creams, ha nwere ike imetụta akpụkpọ ahụ anyị. Ọ bụ ya mere ọ ga-eji dị mkpa inyefe naanị maka ụlọ ọrụ a ma ama.
Oxibenzone gụnyere na ngwongwo nke ọtụtụ ngwaahịa, nke e mere iji kpuchie akpụkpọ anyị site na ụzarị-acha violet. Ngwongwo nke a ga-echebe anụ anyị site na nsi na nká. O yikwara ka ọ na-eweta uru. Otú ọ dị, n'afọ 2008, òtù America "Center for Disease Control and Prevention" mere nnyocha, nke mere ka nkọwa na oxybenzone adịghị njọ. Chemical a nwere ike imubanye na ahu anyi. N'ihi ya, ọ nwere ike ịkpasu ihe nro na ọbụna mgbanwe mgbanwe nke hormonal.
Ụmụ nwanyị nwere mmuta bụ ndị ji ngwaahịa dị mma, nke gụnyere oxybenzone, nwere nwatakịrị nwere ike belata. Mgbe nke a gasịrị, nyocha nke ịta nke oxybenzone na ihe nchebe nke ihe ịchọ mma na-amalite n'ụzọ dị elu. Ihe si na ya pụta bụ ihe na-akụda mmụọ. Enweghi ihe karịrị otu puku ihe. E nwere nnukwu hype, mgbe nke ahụ, ndị na-emepụta ngwa ngwa malitere ịmepụta mmepụta nke SPF markings. Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ọbụna wepu oxybenzone site na ngwakọ, dochie ya na anụ ahụ, mineral (Zinc Oxide and Titanium Dioxide) na ọbụna organic (Mexoril HL, Meksoril CX, Tinosorb M., Tinosorp C) nzacha.
Taa na ụfọdụ ngwaahịa ịchọ mma ihe a ka dị. Ya mere, na-ele anya na-eji nlezianya na-amụ ihe. Okwesiri iburu n'uche na na nhazi ihe omimi nke oge a nwere ihe ndi n'ejigide usoro ozo na aru ogwu.
Ndị nchekwa a na-enyere aka igbochi ịmepụta ihe dị iche iche na ihe ịchọ mma. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị kweere na ha nwere ike ịmịnye ọbara na-akpata ọrịa kansa. Otú ọ dị, data ndị ahụ adịghị edozi. Ma n'agbanyeghi nke a, ọtụtụ ụlọ ọrụ malitere ịdọrọ mpaghara a ngwa ngwa site na usoro nke ego ha. A sị ka e kwuwe, ọtụtụ ndị na-atụle parabens na-emerụ ahụ ike.
Ọ bụrụ na ị nọ na ọnụ ọgụgụ, mgbe ahụ, anyị nwere ike ịkwado gị ịzụta nlekọta na karama akpụkpọ anụ - na nfuli ma ọ bụ ndị na-enyefe ya. Ha nwere obere ego nke ndị na-eme ka ahụ sie ike, dị iche na ite ndị a na-eme n'oge ochie, nke na-enweta ụmụ nje na ikuku.
Taa, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ, nke gụnyere phytohormones. Ụmụ nwanyị na-ejiri ụkwụ na-atụ egwu ha. Dị ka a na-achị, phytohormones na-enyere aka ịmalite ime, ime, na ọtụtụ nsogbu gynecological, nsogbu akpụkpọ anụ na ihe ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, o siri ike iji ọgwụ ndị ọzọ dochie ya. N'ezie, onye ọ bụla nwere echiche banyere phytohormones. Na otu esi ele ha anya dị ka ndị na-adịghị njọ - ndị na-enyo enyo, n'ihi na ha na-ebu mgbanwe ndị na-enweghị mgbanwe n'ahụ anyị.
Ma, n'agbanyeghị nke a, phytohormones bụ akụkụ nke ụfọdụ creams. Ha nwere ike na-arụ ọrụ n'ime ihe ndị dị omimi nke akpụkpọ ahụ, meziwanye njikọ epidermal intercellular na-akpali mkpesa nke elastin na collagen ohuru. Dabere n'ụdị viscosmetic ha, otu onye nwere ike ikpe ikpe banyere nsogbu ha nwere ike ịkpata. Taa na ịchọ mma boutiques nhọrọ ahụ dị oke mma. Ya mere, tupu i mee ihe ọ bụla, mụọ ihe mejupụtara. Ọ dị ezigbo mkpa ịṅa ntị na usoro nke nchịkọta nke ihe ndị dị na label. Mbụ, e nwere ihe ndị nwere oke ọdịnaya. Woti kpebiri, olee uru ị ga-esi na nke a ma ọ bụ na ude ahụ.
Nkebi nke 1. Jiri acids na cosmetology: hydroxy asịd
Kedu ihe mara mma?
Esi họrọ ma tinye ntọala
Mbido ịdị ọcha
Gini mere ị ga - eji edozi ihe ịchọpụta ihe site na katalọgụ?
Ude maka anụ ahụ
Esi eji mmanu mmanu mee ihe n'ụzọ ziri ezi
Nri na eyịm na cheese
Wedding, ụbọchị nke abụọ, na-ejide
Bath maka ike nke ntu
Echepụta stool ndị e wuru na ya: esi ghara ịghọ onye eji ejiji
Ememe Afọ Ọhụrụ Nri Anyasị Nri
Gịnị mere di ya anaghị achọ mmekọahụ mgbe ọ mụsịrị nwa?
Karọt na salad
Ugboro ala maka nwoke na-amaghị nwoke na 2016 - ịhụnanya na site n'afọ ọmụmụ
Gini mere enweghi ochicho maka di ma enwe ike imeri ya?
Otu esi eme ezigbo mama
Kedu ụzọ kachasị mma isi mee ka gị na onye ị hụrụ n'anya dị n'udo?
Kedu ihe ezé nwa ahụ yiri?
Lekọta nwa dị mma
Nri Apple na ginger na pawuda
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m agbaji condom?
Sanwichi na azụ na ihendori
Sugar bụ ọkwa nke onwe m banyere heroin ma ọ bụ nrọ banyere shuga